ISTICMAALKA ISTEROBERKA: FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA CAAFIMAADKA AADANAHA - KU'SAABSAN
Ku'saabsan beeray saddex sano oo millenniya ah. Duurjoogta, waxay u koreysaa Eurasia ilaa 60 darajo waqooyiga woqooyi. Cilmi-baadhayaashu waxay aqoonsadeen laba xarumood oo qadiimiga ah ee domesiyada duurjoogta ah - Shiinaha iyo Aasiyada Aasiyada yar, laakiin meesha ugu horaysay ee loo beeray lama ogayn. Dhaqdhaqaaqa iyo dhadhanka caafimaad qabta pear mid ka mid ah midhaha ugu jecel badan (waxaa jira in ka badan 5000 oo noocyo kala duwan). Dad badan ayaa aaminsan pear - Tani waa faa iido adag iyo waxyeelo ka timaadid. Aynu isku dayno inaanu ogaano haddii ay sidaas tahay.
Ma taqaanaa? Macluumaadka ugu horreeya ee ku saabsan pears ayaa laga heli karaa ilaha II Millennium BC. e. Pear waxaa lagu beeray Faaris (ee Homeric Odyssey waxaa jira sharaxaad ah orchard ah Persian oo leh isteroberi) ee Shiinaha hore. Frescoes ka Pompeii sawirro u bislaaday. Thanks to Giriigyadii hore iyo Roomaaniga, isteroberi ayaa ku baahsan Yurub oo dhan. Roomaanku waxay ugu yeeraan pear "Pyrus" - "Flame". Ilaha hore waxay u adeegsadeen magaca "pear" laga soo bilaabo qarnigii XII (ereyga ka yimid Faaris). In qarnigii XVII ee luqadda Ruushka - "Dula" (amaahda laga soo bilaabo Polish).
Calorie iyo halabuurka kiimikada ee pear
Shiinaha qadiimiga ah ee loo yaqaan 'pear pear' ee dhimashada sabab la'aan. Marka laga reebo dhadhanka, tayada dabeecadda iyo qiimaha tamarta hooseeya - laga bilaabo 42 illaa 54 kcal (taas oo ka dhigaysa pear naadir u ah cuntada), miro ayaa leh unug khaas ah oo u gaar ah. Waxyaabaha ay ka kooban tahay micro-iyo macro-asiidhiyo badan, waa ka sareeya tufaaxa iyo miraha kale. Pear wuxuu ka kooban yahay xubno sida:
kalsiyum, potassium, fosfooraska, magnesium, sulfur, koloriin, sodium;
birta, molybdenum, zinc, manganese, copper, silicon, fluorine, selenium, boron, iodine, cobalt, vanadium, rubidium, nikkel;
fitamiino (B, B1, B2, B3, B5, B9, B12, C, H, A, PP, K, E);
mono - iyo disaccharides, tannins, mono - iyo polyacids, fiber.
Faa'iidooyinka unugyada jidhka
Dhamaan walxahan waxay ku jiraan isku dheelitir siman. Juicy, wax yar oo qummaatada qulqulaya, waxay hagaajinaysaa dabeecadda, waxay leedahay saameyn faa'iido leh nidaamka dheef-shiidka, waxay kicisaa habka wadnaha, waxay yareysaa heerarka kolestaroolka. Waxay faa'iido u leedahay in la cuno pear qaab kasta - waxa uu hayaa sifooyinka qaabka la qalajiyey (ekvar - cabitaan ee isdabajooga cayayaanka qalalan ee laga soo Slavs shakhsiyadeeyey nolol), ee compotes, jelly iyo casiir. Midhaha Tani waxay si gaar ah u leedahay carruurta, haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya.
Waa muhiim! Haddii aan ka hadalno waxtarka isteroberka, waa in la xusuustaa in miro-farsahaani aanu si caadi ah u dhicin xasaasiyad, waana mid ka mid ah miraha yar ee aan ka hor istaagin bukaanka macaanka. On pear calool madow est laguguma talin - macmacaanka sare ee faleebku wuxuu ka xanaajin doonaa xuubka xabka.
Dhalmada uurka iyo naas-nuujinta
Miro-sonkorowga hooseeya ee hypoallergenic wuxuu ku fiican yahay hooyooyinka uurka leh. Pear wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha muhiimka u ah noolaha hooyada iyo ilmaha labadaba:
folic acid (ka hortaga uurjiifka). 100 g of pear ku jira 12 mcg B9;
Faytamiin C (muhiim u ah antioxidant). 100 g pear - 7 mg;
potassium (oo lagu daro fosfooraska, calcium wuxuu taageertaa nidaamka wadnaha ee hooyada iyo ilmaha, wuxuu ilaaliyaa nabarka ilkaha ee uurka);
Fiber (wuxuu ka caawiyaa dagaal calool-galinta - dhacdo soo noqnoqota oo dumarka uurka leh sababtoo ah daawooyinka birta-ilaaliya). Waa in la xusuusto in isticmaalka isteroberi la qalajiyey ay u horseedi doonto natiijada ka soo horjeeda - sida kalluumaystaha sida pear;
carbohydrates fudud (ha ku dar miisaanka).
Marka la dhalo ilmo, haweeney kalkaaliso ah waa inay go'aamiso cuntada: cuntada ay ku jiri karto, kuwaas oo aan ahayn. Caadi ahaan isteroberayaasha waxaa lagu daraa cuntooyinka bisha koowaad ee nolosha ilmaha - isteroberyadu waxay leeyihiin walxahan kuwaas oo muhiim u ah xilliga nuujinta (waxaad u baahan tahay inaad ku bilowdo isbiriqyo duban, macaanka juuska, casiir ama qasacad - iyadoon loo eegin hababka wax lagu shaqeynayo, fiitamiinada pear weli).
Markaad u beddeleysid miraha cusub markii ugu horeysay, waxaa fiican inaad naftaada xaddido jeex yar oo pear ah isla markaana fiiro u yeelashada cunuga. Si wadajir ah caanaha naaska, ilmuhu wuxuu heli doonaa dhammaan waxyaalaha waxtar u leh ee pear uu hodan yahay.
Waa muhiim! Marka aad soo iibsato isterobuuro la soo dhoofiyo, xasuusnoow in miraha la baaraandego qashin khaas ah, wax lagu kaydiyo muddo dheer. Sidaa daraadeed, maqaarka leh pear waa ka wanaagsan yahay inuu nadiifiyo mindi oo iska tuur.
Dhakhaatiirta carruurta badankood waxaa lagula talinayaa in ay bilaabaan quudinta ilamaha leh isteroberi da'doodu tahay toddoba bilood (oo aad isku daydo in aad tijaabiso dhowr dhibcood oo casiir ah oo si tartiib ah u kordhiya qiyaasta adoo aadaya pear pie). Nasiib ayaa si fudud loo dheefshiiday oo waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah jirka ilmaha, sababtoo ah:
hagaajinta aragtida iyo habka dheef-shiid kiimikaad (sababtoo ah carotene), kordhinta difaaca;
Xoojinta lafaha qalfoofka (tan waxaa lagu sameeyaa potassium, iron, calcium, magnesium iyo fosfooraska);
bixiyaan folic acid si loo sameeyo dhiig;
sii wanaajiyaan xaaladda timaha iyo maqaarka (iyadoo la adeegsanayo baaruud);
waxay caadi u tahay floranka mindhicirrada (sababtuna tahay fibriga iyo faylka);
wuxuu taageeri doonaa habdhiska dareemayaasha, hubinta habka dib u soo kabashada unugyada iyo kordhinta iska caabinta caabuqyada (fitamiinada B iyo C), iwm.
Qaybta maalinlaha ah ee carruurta ilaa hal sano waa inay ahaataa 50 g, ilaa laba sano - 1-2 pears. Waqtiga ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'pear snacking' waa saacad ka dib cunista.
Ma taqaanaa? Marka la barbardhigo tufaaxa, plomme iyo fersken, pear ma aha mid la saadaalin karo dhadhanka, waxay noqon kartaa mid adag, jilicsan, jilicsan iyo dhuxul badan. Pear qani ku ah waxaa la cuni karaa "chrome", oo waad cabbi kartaa. Magaashiyada dhadhanka - ugu kala duwan (laga bilaabo liinta iyo strawberry ilaa caramel iyo cananaaska). Kalluunku waa doorashada ugu fiican ee isteroberi. Cayayaanka aan bisil lahayn waxay leedahay caraf udgoon oo xoog leh - xoogga caraf udgoon, dhadhanka midhaha.
Isticmaal daawada dabiiciga ah: daaweynta pear
Daawada rasmiga ah waxay aqoonsantahay xayawaanka cuntooyinka badeecadda, awoodda ay u leeyihiin in ay caadi u yeeshaan shaqada xiidmaha. Kiimikada daawada dadku waxay qaadataa meel aad u qiimo badan. Inta badan cuntada caadiga ah ee daawooyinka, qaybta ugu muhiimsan waa pear-dick. Guryaha daawooyinka ee pear, ubaxa, caleemaha iyo caleemaha ayaa muddo dheer loo isticmaalay in lagu daaweeyo noocyo kala duwan oo cudurro ah (cudurka wadnaha, kalyaha, beerka, qufac adag, iwm).
Kalluunku wuxuu dhifeeyaa sababa xasaasiyad.
Waxaa loo isticmaali karaa dagaalka ka dhanka ah xasaasiyadaha:
ee lagu daaweynayo cuntada - ka mid noqoshada badeecadan yar-alerjigeed ee ku jira halbeega suxuunta (tusaale ahaan, boorashka);
oo ah qaab isku darka ah, oo la qaato xilliga xasaasiyadda alerjiga laba jeer maalintii hal galaas. Isku dar ah decoctions of 100 g oo isteroberi qalajiyey iyo 100 g oo ah oatmeal la sameeyey. Pear waa la daadi jiray litir biyo ah karkaraya iyo la karkariyey nus saac. Baateemka ku shub 1.5 litir oo biyo ah iyo isku kari ilaa 20 daqiiqadood. Labada marwooyinka labadoodaba waxay adkeeyaan (2 saacadood) oo isku daraan;
sida faleebo. Pound pears qallaji karkariyo oo isku kari ilaa 20 daqiiqadood kuleylka hooseeyo ee laba litir oo biyo ah, ka dibna ku adkeyso 2 saacadood. Cabbitaanka cabitaanka cuntada ka dib (hal galaas).
Iyada oo shuban
Awooda cayayaanka ee la dagaallanka infekshinka, xakameynaya maadada loo yaqaan "pathogenic microbes" ayaa lagu isticmaalay daawada dhaqameed. Tannin ee halabuurka pear u adeega sida astringent, pectin taageeri doonaa xuubka dheecaanka. Waxaad cabi kartaa cabitaan cusub oo juus ah oo isdabajoog ah, waxaad sameyn kartaa decoction of pears duur joogta ah (halkii 100 g of pears, nus litir oo biyo ah, karkariyo iyo istaag 10 daqiiqo ka badan kulaylka yar yahay.
Dhakhaatiirta dhogorta ah waxaa badanaa loo yaqaannaa midhaha "awoodda lab ah". Waxyaabaha ugu sarreeya ee arbutin iyo fitamiin P ayaa joojiya xanjo qanjirka 'prostate', waxay hagaajisaa wareegga dhiigga, waxay ka caawisaa cillad aan caadi ahayn. Isticmaalka dekoction ee miraha iyo caleemaha qoyan maalin kasta muddo 2-3 bilood ah ayaa ka reebaysa sii xumeynta cudurka, waxay yareysaa khatarta prostatitis ee ragga waaweyn.
Daaweyn wax ku ool ah waa faleebo ubax ah (30 g oo ah qalab ceeriin ah oo ku adkeysanaya 0.5 litir oo biyo ah karkaraya 5 daqiiqo), taas oo, ka dib markaad wax cabto, waa in la sakhraamo maalin kasta.
Iyada oo uu kaadiheysto
Glycoside arbutin ee isteroberi ayaa leh saameyn antiseptic, suuxdin. Daaweynta xayawaanka, daawo dhaqameedku waxay ku talineysaa in ay qaadato cabitaan maalinle ah (50 g mid kasta), dib-u-habaynta jeex-jeex (1 koob). Dib-u-habeyn wanaagsan, diyaariyay caleemaha qallalan ee geedka geedaha (1 tbsp. qaado), yar yar, jilicsan (sidoo kale 1 qaado qaado). Waxyaabaha ay u baahan yihiin inay qaso iyo ku shub 0.5 litir oo biyo ah karkaraya, ka dibna ku adkeyso 40 daqiiqo. Ka dib markii lagu xareeyo qaybo yaryar waxay qaataan maalinta oo dhan.
Awoodda pear ah si loo bogsiiyo nabarrada ayaa lagu ogaadey taariikhda hore (waxaa la rumaysan yahay in Avicenna uu sameeyay). Daawo dhaqameedku waxay taageertaa aragtidan: nabarrada cusub ayaa lagu daaweyn karaa saxarka pear (haysta 10 daqiiqo oo maydh); rafaadka ka soo gaaray boogta hore waxay u badan tahay in la baabi'iyo haddii ay si joogto ah u burburiso qashir ku'saabsan. Haddii boogta ay muddo dheer socoto ama dabbaaldegto, waxaa lagula talinayaa in lagu maydho decoction of 50 g oo ah maqaarka pear, welded ee 1 litir oo biyo ah. Qodobka antiseptic ee pear ayaa dardargelin doona bogsashada.
Sidee loo isticmaalaa isteroberyada maqaarka
Isticmaalka isteroberyaha kookhoolojiga wuxuu leeyahay caado dheer. Daawo dhaqameed dhaqan ahaan waxay adeegsadeen sifooyinka soo socda ee isteroberi si kor loogu qaado soo jiidashada:
saamaynta dib-u-cusbooneysiinta (cusbooneysiinta unugyada maqaarka);
anti-bararka (ka-saarista xanaaq, firiiricyo, casaan);
tayada (dib u nooleynta).
Fusiyooyinka pear caleemaha waxay ka caawiyaan la dagaallanka dabka, adkeeyna nacasta, kobcin maqaarka leh fitamiino. Muuqaalada, saqafyada, kiriimyada, looska iyo macmalka kale ee is-qurxinta waxaa lagu abuuray saldhiga pear.
Mid ka mid ah habka ugu fudud ee loo yaqaan "pear scrub scrub" (noocyo adag oo "dhoobo") ayaa si gaar ah loogu habboon yahay) - maqaarka ayaa si fiican loo nadiifin doonaa, oo la kobciyo asiidh iyo fitamiino, iyo dhibco yaryar.
Marka dhibaato la saaro maqaarka (qashin) waxaa lagula talinayaa in lagu jaro juuska juuska ee xididdada timaha 30 daqiiqo ka hor intaadan timaha u dhaqin 2-3 todobaad.
Maqasadaha dhoobada ayaa ah mid ka mid ah hababka ugu caansan ee isticmaalka isteroberi ee kondomoole. Ka samee miraha bislaado, oo isku daraya waxyaabo kale:
laga bilaabo isteroberi iyo labeen kareem (dhoobo hal pear, labeen dhanaan ah (qaado). Maaddooyinka waa isku dhafan oo codsaday 20 daqiiqo - maqaarka wejiga waa la siman yahay;
pear iyo ukunta (saxarka hal pear, ukunta cad). Beatso borotiinka, ku dar pear, dalbasho 20 daqiiqo maqaarka oo ku tirtir biyo diirran - waxay yareyneysaa maqaarka maqaarka, xanaaq;
pear, malab iyo kareem (pear, kareem culus, casiir liin leh, malab dareere ah (shaaha). Waxyaallaha walaaqa, ku dabool maqaarka wejiga. 20 daqiiqo ka dib, raaci shaaha cagaaran - maqaarka ayaa dib u soo noolaanaya oo tayadoodu kori doontaa.
Waa muhiim! In lagu soo saaro kiriimyada guriga, maskadaha, kareemada, ku xoqida oo ku saleysan pear, waa in la isticmaalo miraha ugu bislaaday - waxay ku jiraan ugu badnaan nafaqooyinka iyo walxaha faa'iido leh.
Goynta iyo kaydinta alaabta ceeriin laga bilaabo isteroberi
Midabka geedaha, caleemaha yaryar, caleemaha iyo midhaha pear waxay ku xiran yihiin diyaarinta. Kiimiko lo'da ayaa si tartiib ah loo goostay - maadaama ay qaangaadhayaan:
Abriil - May - Caleemaha dhalinyarada (inta lagu jiro duufaan, ubaxyada caleemaha yar yar);
May - Juun - ubaxyo iyo caleemo;
Julaay - Agoosto - Noocyada kala duwan ee xagaaga;
Sebtember - noocyada dayrta;
horraanta Oktoobar - noocyada xilliga qaboobaha (waa la hayn karaa ilaa sideed bilood).
Laga soo bilaabo xagaaga iyo dayrta kala duwan ee isteroberi ayaa sidoo kale sidoo kale laga goostay ilaalinta (macaanka, cabitaanka, cabitaanka miro, jellies, macaanka) iyo miraha la qalajiyey.
Pear qasacaduna waxay haysaa waxyaabo badan oo faa'iido leh, laakiin pear qallalan ayaa noqon doona waxtar badan.
Isteroberi ayaa loo doortaa qalajinta waxayna bilaabaan inay bislaadaan. Ku dhaq pears (uma baahnid in ay dildesho, miraha yar la qalajiyey leh asliga ah). Haddii isteroberi aad u weyn - waa la gooyaa karaa nus.
Ka hor inta aanad engegin, waa lagama maarmaan in mawduuca mawduuca lagu daaweeyo daaweynta - kudhee biyo karkaraya ilaa jilicsan la helo (iyadoo ku xiran dareenka, min shan ilaa toban daqiiqo). Waxaad ku dari kartaa sonkorta, liin, qorfe.
Qalalan qorraxda hooska (illaa 2-3 maalmood), ka dibna la qalajiyey qol hawo la gashado (dharbaaxo dusheed); foornada (heerkulkiisu yahay 55 illaa 60 digrii). Si tartiib ah, isteroberi ayaa noqda mid qallalan oo adag (ka dib, marka la wada baabbi'iyo, waxay u baahan yihiin in la caydhiyo - shaandhadu waxay ka dhigi doontaa mid jilicsan oo dhadhan fiican leh, iyada oo la hayo dhammaan walxaha faa'iidada leh).
Way ka fiican tahay inaad ku qallajiso (si ka wanaagsan inaad soo ururiso isteroberi cimilada qallalan), miraha cakiran. Waxay u fiicantahay in lagu keydiyo miro ku yaal sanduuqyo alwaax ah. Miraha waa in ay dabagalaan oo aysan taaban midba midka kale (waxaa lagu kala saari karaa warqad, sida balka). Qolku waa inuu ahaadaa mid qalalan oo aan kululayn.
Ma taqaanaa? Noocyada xilliga qaboobaha ma aha kuwo ka liita adeegsiga iyo dhadhanka xagaaga iyo dayrta. Sida loo kaydiyo, foormaatka dhagaxu wuxuu u bislaa, macaanku wuxuu kordhiyaa, maqaarka oo la baabi'iyaa, dhadhanka ayaa hagaajiya. Noocyo pear jiilaalka ayaa la isticmaali karaa jiilaalka iyo xilliga gu'ga, marka fitamiinada waa yar yahay.
Iskudhinta iyo waxyeellada isbiirsaday
Isticmaalka isteroberi cusub ayaa ka horjeeda qaar. Nasiib darro caafimaad leh ayaa dhici karta haddii ay dhacdo:
isticmaalka miro-geedka kuwan oo ay qabaan dadka qaba xanuunka caloosha, boogta (xaaladdan, waa in lagu daaweeyaa miraha la dubay ama la kariyey). Kiimiko cusub wuxuu sidoo kale noqon karaa mid aad u "culus" caloosha dadka waayeelka ah;
Isticmaal tartar, nuusarro dhanaan dadka qaba cudurada habka dhexe ee dareenka;
dulqaad shakhsi ah oo ay sameeyaan dadkan midhihiisa (xaalad aad u dhif ah).
Waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato inaad cuntid isteroberi inta lagu jiro mudada jirradan cuduradan, iyo sidoo kale inaadan noqon mid daalan oo aanad cunin miro cusub.
Ma taqaanaa? Markaad karineysid isteroberi iyo xulashada dhir udgoon, waa in maskaxda lagu hayaa in saaxiibadooda ugu fiican ay yihiin toon, lowska, qorfe, basil, sage, allspice. Dhadhanka gaarka ah waxaa la siin doonaa isku dhafka pear ee buckthorn badda iyo berry ee lingonberry.